Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Mpandeha fanandramana 200 no nofaohin'ny rano tao amin'ny tobin'ny seranam-piaramanidina Helsinki
Ho avy tsy ho ela ny vanim-potoana fitsangatsanganana vaovao rehefa manokatra ny elatra atsimo vaovao any amin'ny seranam-piaramanidina Helsinki i Finavia mandritra ny fahavaratra 2017. Alohan'ny hanokafana dia hanasa mpilatsaka an-tsitrapo 200 ho any amin'ny seranam-piaramanidina i Finavia mba hanandramana fa miasa araka ny tokony ho izy ny fiasan'ny elatra atsimo.
Finavia dia manana programa fampandrosoana tsy tapaka ao amin'ny seranam-piaramanidina Helsinki, sahabo ho iray lavitrisa euro, izay hanitatra ny seranam-piaramanidina sy hampitombo ny fahaizany. Miaraka amin'ny programa fampandrosoana, Vinavia dia vonona hanompo mpandeha 20 tapitrisa ao amin'ny seranam-piaramanidina Helsinki isan-taona amin'ny taona 2020.
Ny tapany voalohany amin'ny fanitarana vaovao, ny elatra atsimo, dia vonona hosedraina ary miandry ny fikasihana farany vao hosokafana ho an'ny mpandeha.
Finavia dia handamina fitsapana fametrahana tsy manam-paharoa amin'ny toe-tsaina milalao andraikitra ao amin'ny seranam-piaramanidina Helsinki amin'ny Alakamisy 6 Jolay 2017. Ny tanjon'ny fitsapana fametrahana, izay lehibe indrindra amin'ny tantaran'ny seranam-piara-manidina, dia ny manome antoka alohan'ny hametrahana ny asa sy ny fizotran'ny terminal. amin'ny asa elatra atsimo araka ny tokony ho izy.
- Ny andro fitsapana dia namboarina mba hiantohana ny fivezivezena milamina sy mahafinaritra, izay vato fehizoron'ny serivisinay rehetra. Ny mpandeha fitsapana dia hanana andro tsy manam-paharoa ao amin'ny seranam-piaramanidina sy ny fahafaha-mijery any ambadika, hoy ny talen'ny seranam-piaramanidina Helsinki Ville Haapasaari avy any Finavia.
Mandritra ny andro fitsapana, ny fahitana ireo famantarana, ny fahafinaretan'ireo mpandeha ary ny vahaolana ara-teknolojian'ny seranam-piaramanidina, ankoatry ny hafa, dia hojerena.
- Ohatra, hizaha toetra ny fahitan'ny mpandeha fitsapana mankany amin'ny vavahady fiaingana sy ny fomba fivezivezanan'ny mpandeha amin'ny sezakodia eo amin'ny seranam-piaramanidina. Hizaha zavatra azo ampiharina ihany koa izahay, toy ny fiasan'ny varavarana sy ny lalan-tongotra mihetsika ary ny malama amin'ny fizotran'ny fidirana. Ny valiny izay ho raisinay avy amin'ireo mpandeha fitsapana dia sarobidy, satria afaka mandray ny hetahetan'ny mpandeha izahay ary mila dinihina amin'ny famitana ny elatra atsimo, hoy i Haapasaari.
Ny traikefa amin'ny dia amin'ny sehatra vaovao
Finavia dia mitazona fomban-drazana lava amin'ny fampivoarana ny seranam-piaramanidina Helsinki miaraka amin'ireo mpandeha ao aminy. Iray amin'ireo mpandraharaha seranam-piaramanidina voalohany eran'izao tontolo izao niara-niasa tamin'ny mpandeha tamin'ny ambaratonga lehibe toy izany.
- Hitanay fa zava-dehibe ny fahafahan'ny mpiasanay mandray anjara amin'ny asa fampandrosoana. Ohatra iray tamin'ny taona lasa ny tetik'asa Quality Hunters sy TravelLab nahomby izay nahaliana sy nankatoavina eran'izao tontolo izao. Ny fitsapana fametrahana dia fitohizan-javatra voajanahary amin'ireo tetik'asa ireo, hoy i Haapasaari.
Ny singa serivisy vaovao ao amin'ny elatra atsimo dia misy mpandeha fizahan-tany sy mpaninjara rano mafana sy mafana, sns.
- Tianay ny hitazona ny fanananay matanjaka indrindra amin'ny fifaninanana, dia ny fanomezana ny serivisy rehetra ao ambanin'ny tafo iray ihany ary hiantohana ny fidirana amin'ny vavahady iray mankany amin'ny iray hafa, na eo aza ny fanitarana ny terminal. Izany no antony hametrahana ny mpandeha ny seranam-piaramanidina voalohany mankany amin'ny elatra atsimo. Ireo mpaninjara rano mafana indray, dia natao manokana ho an'ireo mpandeha sinoa, vondrona fitaterana mpandeha haingana indrindra, hoy i Haapasaari.
Finavia dia mikasa ny hanokatra ny elatra atsimo ho an'ny mpandeha mandritra ny fahavaratra 2017. Ny fanitarana ny seranam-piaramanidina iray manontolo dia tokony ho vonona amin'ny taona 2020.